घर किन्दा यति राम्री श्रीमती सित्तैमा – Ekathmandunepal
Homeकथाघर किन्दा यति राम्री श्रीमती सित्तैमा
५ पुष २०७४, बुधबार २०:१५ ekathmandu Nepal कथा 0
एजेन्सी । एउटा सामान किन्दा अर्को सामान सित्तैमा लगायत अफर सुनिएकै हो । तर, भर्खरै यो अफरलाई पनि चुनौति दिँदै बजारमा ‘घर किन्दा श्रीमती सित्तैमा भन्ने अनौठो अफर अहिले चर्चामा छ ।
इण्डोनेसियाको यो अफर जहाँ घर किन्दा श्रीमती सित्तैमा पाइने एउटा विज्ञापनले अहिले ठूलै तहल्का मच्चाएको छ र उक्त विज्ञापन इण्टरनेटमा भाइरल बनेको छ । एकजना महिलाले आफ्नो घर बिक्रिका लागि विज्ञापन गरेकी छिन् र आफ्नो घर किन्ने पुरुषले आफूलाई श्रीमतीको रुपमा पाउने घोषणासमेत गरेकी छिन् ।
अनलाइन विज्ञापनको सुरुवाती हिस्सा सामान्य विज्ञापन जस्तो छ र यसमा घरमा रहेका विशेषता उल्लेख गरिएको छ । तर अन्त्यतिर भने दुर्लभ अफर प्रस्तुत गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘जसले यो घर किन्नुहुन्छ उसले यो घरकी मालिक्नीसँग बिहेको प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ ।’ विज्ञापनमा घर मालिक्नीको तस्वीर समेत दिइएको छ । विना लिया नामकी ती ४० वर्षे महिला श्रीमानको मृत्युसंगै हाल एकल महिलाको रुपमा रहेकी छिन् र उनको आफ्नो सैलुन समेत छ ।
यो घर गम्भीर खालका क्रेताहरुको लागि मात्र रहेको र यसमा कुनै सौदाबाजी नहुने विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ । जाभा द्विपस्थित स्लेम्यानमा रहेको यो घरको मूल्य ९ करोड ९९ लाख इण्डोनेसियन रुपैयाँ अर्थात् झण्डै ७५ हजार अमेरिकी डलर तोकिएको छ । एएफपीका अनुसार घर मालिक्नी विना लियाको यो विज्ञापन इण्डोनेसियाका संचार माध्यममा मात्र होइन सोसल मिडियामा समेत निकै चर्चित बनिरहेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
बुढाको भन्दा त तपाईंको ठुलो रहेछ (767)
मैले मेरो २० बर्से दिदी सँग यसरी रात बिताएको थिए… (583)
खुट्टा फर्किने भनेको के हो ? किन फर्किन्छ खुट्टा ? (293)
यौन सम्पर्क गर्नुअघि पिसाब फेर्नु सहि कि गलत ? (194)